यातायात कार्यालय सार्न सेटिङः सडक आयोजना र ठेकेदार कम्पनी प्रयोग, सूचना निकाल्नु अघि भवन तयार - Dipkhabar - Online News Destination
यातायात कार्यालय सार्न सेटिङः सडक आयोजना र ठेकेदार कम्पनी प्रयोग, सूचना निकाल्नु अघि भवन तयार
प्रकाश तिम्सिना असार १६, २०७८
इटहरी २ आपगाछीमा रहेको यातायात कार्यालय सर्ने विषय यति बेला निकै चर्चामा छ । मुख्य सडक राजमार्ग छेउमा कार्यालय रहँदा सडक दुर्घटना भएको तथा पार्किङ गर्न समस्या भएको भन्दै अन्यत्र सार्न लागेको हो ।
७ वर्ष सम्म एकै ठाउँमा कार्यालय बसेको छ । आफ्नै कार्यालय इटहरी १० मा करिब २१ करोड लागतमा निर्माणधिन अवस्थामा छ । हाल बसिरहेको भवनको सम्झौता सकिन अझै केही महिना छ । तर कार्यालयले भवन खोजीका लागि गत जेठ ११ गते एक सूचना जारी गर्यो । सूचनामा इटहरी चोकबाट २ किलोमिटर आसपास, ८ कट्ठा जग्गा बाराबार गरेको, १५ कोठे घर सकेसम्म झ्यालबाट सेवा दिन मिल्ने, ७ फिट प्यासेज भएको त्यति मात्रै हैन । ६ वटा ट्वाइलेट बाथरुम हुनु पर्ने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न ६० फिट लम्बाई र १५ फिट चौडाइ लगायतका भित्री साना विषय उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि यति बेला उक्त विषय चर्चामा छ । आफ्नो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवनको छिटो काम सक्न दबाब दिनुपर्ने कार्यालयले एक वर्षका लागि किन अन्त सारिँदै छ ? ७ वर्ष सम्म एकै ठाउँ बसेको कार्यालय १ वर्षका लागि किन सार्न खोजियो ? सूचनामा माग गरिए जस्तो इटहरीमा भवन कहाँ छ ? कार्यालय प्रमुखले कतै विभिन्न राजनीतिक दल तथा बाह्य व्यक्तिको निजी स्वार्थका लागि कतै सार्न लागेका त हैनन् ? जस्ता विषयले यति बेला धेरैको मन तानेको छ ।
सूचना जारी गर्नु अघि भवन तयार
भवन खोजीका लागि कार्यालयले जारी गरेको सूचना अघि नै भित्री रूपमा भवन तयार गरेको खुलेको छ । इटहरी ८ विजुुली अफिस छेउमा एक व्यक्तिको जग्गामा माथिका सूचनामा उल्लेख भएअनुसार नै घर निर्माण गरेको बाहिर आएको हो ।
स्थानीयले पनि यहाँ यातायात कार्यालय सर्न लागेको बताउँछन् । कार्यालयले सूचना जारी गर्नु अघि स्थानीयलाई थाहा हुनुले पक्कै पनि कार्यालयका हाकिमको सेटिङ भएको प्रष्ट देखिन्छ । यति मात्रै हैन सेटिङ भनिएको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ तर काम गर्ने कामदारलाई एक महिना भित्र कार्यालय सर्दै छ तुरुन्त काम सक्नुभन्दै ठेकेदारले भन्ने गरेको एक कामदारले बताए ।
आफ्नो गल्ती छोप्न सडक विभाग र ठेकेदारसँग हारगुहार
कार्यालयले सूचना जारी गर्नु अघि नै भवन ठिक्क पारेको विषय बाहिरिएपछि सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेम प्रसाद सापकोटा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न लागेका छन् । कार्यालयले सूचना गत जेठ ११ गते निकालेको थियो । आफू उन्मुक्ति पाउनका लागि निर्माणाधीन ६ लेन सडक आयोजनासँग एक पत्र बनाइदिन भनेका थिए । सोही बमोजिम यातायात व्यवस्था निर्देशनालयको नाममा गते जेठ २७ गते हाल रहेको सडकको ५ मिटर आसपासको सम्पूर्ण संरचना हटाउनु भन्दै पत्र काटेको थियो । सडक विभागलाई मात्रै हैन यातायात कार्यालय निर्माणको ठेक्का पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पनि सापकोटाले गुहारेका छन् । कार्यालयले यही पौषमा सम्पन्न हुनुपर्ने भवन कोरोना महामारी र बर्खा यामका कारण अबको डेढ वर्ष लाग्ने भन्दै जेठ ३० गते यातायात कार्यालयलाई पत्र पटाइदिएको छ । काम छिटो सक्नु भन्दै ठेकेदारलाई भन्नु पर्नेमा यसरी पत्र बनाई अन सार्न खोज्नुले पनि थाहा हुन्छ कार्यालयमा पुरै सेटिङ छ भन्ने ।
ड्राइभिङ स्कुल सङ्घको विरोध
यातायात कार्यालय सार्ने विषयमा ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ प्रदेश १ समितिले विरोध गरेको छ । सडक दुर्घटनाको बहाना बनाएर कार्यालय निजी स्वार्थका लागि सार्न लागेको भन्दै विरोध गरेको हो । समितिका अध्यक्ष बाबुराम प्रधानले यो सबै सेटिङ नै भएर गरिएको विज्ञापन हो । यातायात कार्यालय अब इटहरी ८ कै बन्दै गरेको भवनमा सर्छ ।
यातायात कार्यालयले नयाँ भवनमा खोजेको मापदण्ड र त्यो भवनको मापदण्ड एकै भएको, भवन त्यहीँ सार्न सबै मिलाएर औपचारिकताको लागी मात्रै विज्ञापन भएको उनले बताए । पुस मसान्तसम्म इटहरी १० मा निर्माणाधीन यातायात भवन बनिसक्ने भए पनि त्यो अगाडि नै सर्ने सेटिङ भएको ड्राइभिङ सङ्घको दाबी छ । विज्ञापनमा घर नक्सा पास नभनेर ‘घरजग्गाको कित्ता खोली चार किल्ला उल्लेख’ गर्ने भन्ने सूचना पनि त्यही इटहरी ८ को अस्थायी घरको लागी बनेको सङ्घले बताएको छ ।
सङ्घ प्रदेश १ समितिले यस विषयमा इटहरीस्थित अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देखी सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजुरी दिइसकेका छन् । तर आज सम्म कुनै निकायले पनि चासो नदिएको उनको भनाई छ । भवन बनाइरहेको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले पुस मसान्तभित्र बनाइ सक्ने बताएको र पुरानो कार्यालयको भवनको सम्झौता पनि नसकिएको भन्दै कार्यालय सार्नु ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाएको छ । चलखेलमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक भीम गौतम र इटहरी कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाको प्रमुख हात रहेको प्रधानले आरोप लगाए ।
के भन्छन्, निमित्त कार्यालय प्रमुख सापकोटा
यता कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेम प्रसाद सापकोटा भने नियम अनुसार नै कार्यालय सार्ने तयारी भएको दाबी गर्छन् । ६ लेस सडक आयोजनाले अबको ५ मिटर आसपास काट्ने भएकाले कार्यालय सार्नु परेको बताए । सडक दुर्घटना बढ्दो छ । सवारी पार्किङको समस्या नि उस्तै छ । सेवाग्राह्रीलाई सहज रूपले सेवा दिने उद्देश्यले सार्न तयारी गरिएको उनको भनाई छ । कहाँ सर्छ, कस्तो ठाउँमा हुन्छ अहिले भन्न सक्दिन, उनले भने ‘आवेदन आएका आधारमा भवन छनौट गर्छौ, यहाँबाट अन्यत्र सार्न २ लाख भन्दा बढी खर्च लाग्दैन ।’